ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲလမ်းမှုသည်မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ Weiss နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနော Church ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (အပိုင်း ၁) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌လှုပ်ရှားမှု
ဒါဟာ Porn စွဲ Be မှလိုပဲကဘာလဲ? Weiss အင်တာဗျူးများနောဧသည်ဘုရားကျောင်း (အပိုင်း 1)
နောဧသည်ဘုရားကျောင်း porn စွဲနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးလူသိများတဲ့ပီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုသာသက်ရောက်သည်ဘယ်လိုမှာပညာရေးဆိုင်ရာကြည့်။ ထို့အပြင်သူသည်က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပြီး, အင်တာနက်က Porn စွဲ။ ဤ site တွင်သူသည်သတင်းအချက်အလက်ပြုစုထားပါတယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသူများ '' အတွေ့အကြုံများကနေသင်ယူခဲ့တယ်။ သူလည်းတဦးတည်း-to-တဦးတည်းရုန်းကန်နေကြသောသူတို့အဘို့နည်းပြအလုပ်ကိုပေးထားပါတယ်။ မကြာသေးမီက နော my သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်၊ ချစ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှု ၁၀၁ podcast တွင် cast ည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွက်နော with နဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာတင်ပြချင်ခဲ့တယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှု၏အပိုင်း ၁ ဖြစ်ပြီးနော use ၏စွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ယင်း၏အကျိုးဆက်များကိုအဓိကထားခြင်းဖြစ်သည်။
ငါကအင်တာနက် access ကိုအတူအိမ်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိသည်ဖို့ဘုံအခါအချိန်အတွက်ကြီးပြင်းဖို့ပထမမျိုးဆက်အကြားခဲ့သည်။ နှင့်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အစဉ်မပြတ်ငါတက်ကြွခဲ့တဲ့လိင် drive ကိုခဲ့ရသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့, ငါအွန်လိုင်းတော်တော်လေးအမျိုးသမီးတွေဓါတ်ပုံတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တောက်ပစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်ရှေ့မှာရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်မအကြောင်းကိုကိုးသို့မဟုတ်ဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်အခါဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါရှာဖွေနေခဲ့ရာတွေ့အများကြီး, အများကြီးပို။ ဒါဟာငါအပေါ်ချိတ်ဆက်ခင်ရှည်လျားယူခဲ့ပါဘူးငါကွန်ပျူတာနှင့်တစ်ဦးတည်းအချိန်ရနိုင်အခါတိုင်းကထွက်ရှာအံ့သောငှါလိမ့်မယ်။ ပထမတော့သူကအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ကွဲလိင်ရုံရုပ်ပုံများခဲ့ပေမယ့်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ငါမြင်သောအရာတို့ကိုအချို့သည်ပိုင်းတွင်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်ငါစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဘယ်အရာကိုဆန့်ကျင်သွားဘဲ, အချိန်ပေါ်သွား၏အဖြစ်ငါကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသောအရာတို့ကိုနည်းတူအများကြီးငါ့ကို excite ဘူး, ငါသူတို့အားထွက်ရှာအံ့သောငှါမယ်လို့သတိပြုမိဖို့စတင် မှာခဲ့သောအရာပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျကိုအနှောငျ့အယှသို့မဟုတ်ငါ့ကိုဘက်မှပြန်လည်တွန်းလှန်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ငါသည် arousal ၏တူညီသောခံစားချက်, ထိုနေ့ Vibe ရနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုလိုအပ်ပုံရသည်။
ငါဖြစ်ကောင်း 13 သို့မဟုတ် 14 တုန်းကကျွန်မရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာတယ်, ဒါကြောင့်ငါအချိန်လေး sneaking အကြောင်းကိုဤမျှလောက်စိတ်ပူဖို့မလိုခဲ့ဘူးနဲ့ကျွန်မအွန်လိုင်းကိုပိုပြီးအချိန်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါပြု၏။ ငါနာရီပေါင်းများစွာဖို့နာရီဝက်ကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုအဘို့, ကနေ့တိုင်းကြီးလို့ပြောပေမယ့်အများဆုံးရက်ပေါင်းမဟုတ်ဘူး။
ဒါဟာငါ 18 ခဲ့သည်အထိတကယ်မဟုတ်ခဲ့ငါပဲ, သင်သိငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအချိန်နှင့်ငါသည်ငါ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကြုံတွေ့ဖူးသောတင်းမာမှုကျော်လွန်သှားသောပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသောငါ၏ပထမဦးဆုံးအစစ်မှန်ဆက်ဆံရေးအတွက်။ ကျနော်တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြ၏ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံလိုနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, ကာလအဘို့။ ခဏလာသောအခါအဒါပေမယ့်ကိုယ့်ငါမျှော်လင့်ခဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏မျိုးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါကငါ့ကိုရန်ထိတ်လန့်ခဲ့တယ်။ ငါသည်ဤငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝမျှော်လင့်ခဲ့င်တစ်ခုခုကြောင့်ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, နှိုးဆော်ခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်း, ငါတစ်ခုစိုက်ထူရမတတျနိုငျကွောငျးကိုအံ့အားသင့်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါကအရမ်းသူမ၏ရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
ငါပြဿနာကဒီမှာဘာပေါ်တွင်သွားနိုင်သောအရာကိုကြည့်ရှုခြင်း, ထိုနေ့ရက်ကိုစွန်အိမ်မှာ သွား. , ငါလုပ်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးအရာအွန်လိုင်းအဖြေတွေကိုရှာခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်အချိန်ကပြန် 2008 အတွက်တော်တော်များများအားလုံးငါတှေ့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလျှင်သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစိုက်ထူရတဲ့ရှိပါက, ထို့နောက်သူကအများစုဖြစ်ဖွယ်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ performance စိုးရိမ်စိတ်။
yeah ။ ငါမည်သူမဆိုပြန်ပြီးတော့ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည်ထင်ကြပါဘူး။
အဲဒီအသုံးအနှုန်းတည်ရှိကြပေမည်။ -Norman Doidge သူ့စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြပေမည် [ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, 2007] ။ သို့သော်လည်းငါသည်အွန်လိုင်းကအကြောင်းကိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာမတှေ့နိုငျတယျ။ ဒါငါ့အရည်းစားနဲ့ကျွန်မအများကြီးပိုပြီးကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါကပဲငါတခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းကပိုအဆင်ပြေရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, စဉ်းစားမိတယ်။
ငါသည်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်ကိုသိပ် masturbate ထင်။ ဒါကြောင့်ငါကရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ချိုးပေးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုမှမထင်ခဲ့ပါဘူး။ ... အဲဒီအချိန်တုန်းကငါကတသမတ်တည်း porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတောင်မှလအတွင်းယူသို့မဟုတ်နိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။
နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုတကယ်သွားခဲ့ရာအကြောင်းကိုကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်မအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားသည်မဟုတ်ခဲ့ဘာလို့ငါနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ငါသိပ်ရှက်ခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့သောကြောင့်ငါတကယ်မည်သူမဆိုအတူကအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ဘူး။ ငါစဉ်းစားနိုင်သမျှသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ကိုယ့်ငါကြားဆက်ဆံရေးကိုချွတ်ချိုးဖဲ့ကြောင်း, ငါသည်ငါ့ရည်းစားန်းကျင်ခဲ့တဲ့အခါတိုင်းဒါမကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ ကိုယ့် "ကောင်းပြီ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ " အဲဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ rationalized
အစဉ်မပြတ်ငါတူညီတဲ့ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းအများကြီးပိုပြီးဆင်တူဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ရှိရာထိုနောက်မှငါသည်ကောလိပ်မှပယ်သွား၏။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောထိုကာလအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသည်နိုင်ခဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖွင့်ငါသံသရာနှင့်ပဲချိန်းတွေ့ပေါ်တက်ပေးသောတူညီသောလမ်းအတွက်အဆုံးသတ်ဆက်ဆံရေးဤမျှနေမကောင်းရှိရာမှရတယ်။
ငါ 24 အသက်အနှစ်နဲ့ကျွန်မသဘောပေါက်သောအခြားပတ်သတ်ပြီး၌ငါ့ဘဝအကြောင်းကိုအတော်အတန်ကောင်းသောခံစားခဲ့တိုင်အောင်အိုကေငါတကယ်ပြန်ဤပြဿနာကိုလာဦးခေါင်းကို-ပေါ်မှာရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည် "မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တစ်ခါတုန်းကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အသွားဘာထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆကျဆံရေးရှိချင်ကြဘူး, အခုကဖြစ်ပျက်မလို့ပဲ။ "
ကောင်းပြီ, အဲဒီအခြိနျမှာငါပင်ကြောင့်ညစ်ညမ်းငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်မသိ။ ထိုအခါငါဆက်ဆက်အခြားကိစ္စများမမြင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်ငါပြန်ရှာနေကြောင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုငါ့အသက်ကိုနီးပါးတိုင်းရှုထောင့်ထိခိုက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏ဆက်ဆံရေး, ငါ့ရည်မှန်းချက်, အရာအားလုံး။ ဒါဟာကျောင်းကောင်းကောင်းလုပ်နေတာမှငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါအကောင်းအဆင့်ရနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့ရည်မှန်းချက်ရဘူးနှင့်မောင်းနှင့်အပိုသင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုများကိုလိုက်ငါ့လှုံ့ဆျောမှု, ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်, အန္တရာယ်များကို ယူ. , ခရီးသွားများနှင့်အမှန်တကယ်ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုနှင့်အတူလုပ်ဖို့လိုထွက်တွက်ဆခဲ့ပေ။ ဤရွေ့ကားငါဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ငါသာနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသက်ရောက်မှုရှိကြ၏ဖြစ်ကြသည်။
* ဒီအင်တာဗျူးကဒီ site ကိုငါ့လာမယ့်ပို့စ်တွင်နောဧဘုရားကျောင်းသည်အနာပျောက်စေသောအားမိမိ path ကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမှပြန်လည်ထူထောင်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ရောဘတ် Weiss LCSW ခြင်းဖြင့်မူရင်းဆောင်းပါး
အင်တာဗျူးအပိုင်း ၂“ဒါဟာ Porn အသုံးပြုခြင်း Quit တစ်ခုစွဲဘို့လိုပဲကဘာလဲ? "